सेवा प्रस्ताव अनुप्रयोगहरूको रूपमा सफ्टवेयर
सास प्रस्ताव समाधानहरू: प्रस्तावनीय र ओक्टिभ
बिहीबार, जुलाई 8, 2010 आइतबार, डिसेम्बर 4, 2016 Douglas Karr
यो पोष्ट रमाईलो छ किनकी म यी दुवै कम्पनीहरूलाई चिन्छु जसले यी विकासहरू गरे प्रस्ताव प्रणाली... र तिनीहरू यहाँ इण्डियानामा छन्! हुनसक्छ यो पर्डु बनाम एन्डरसन विश्वविद्यालयको कुरा हो! स्प्राउटबक्स विकसित प्रस्तावनीय र स्टूडियो विज्ञान भर्खरै जारी छ ओक्टिभ (पहिले टिन्डरबक्स), दुबै सफ्टवेयर वेबको लागि सेवा प्रस्ताव समाधानको रूपमा।
प्रस्तावना कम लागत समाधान हो, आधारभूतको लागि १ $,, प्रोको लागि pro २ and र टीमको लागिaper प्रतिमाह। संगै Highrise एकीकरण, यो एक धेरै सक्षम प्रणाली देखिन्छ रिच सामग्री प्रस्ताव प्रस्ताव बनाउन र पठाउनको लागि - साथै सम्भावितताको गतिविधि अनुगमन गर्ने जो प्रस्तावमा पहुँच गर्दै छ।
यहाँ तिनीहरूको उत्पादको लागि एक सम्बन्धित भिडियो छ:
जस्तो कि क्रिस्टियानको टोलीले छुन्छ, ओक्टिभ राम्रो पालिश गरिएको छ र लिन्छ जहाँ प्रस्तावनीय छोडिन्छ। प्रविष्टि स्तर प्याकेज बिक्री टोलीका लागि प्रतिमाह per $ at मा छ र प्याकेजहरू प्रति महिना $ 79 per मा र इन्टरप्राइज ग्राहकहरूको लागि बढ्छ। ओक्टिभसँग पनि भुक्तान मोड्युल अपसेल र अन्य अनुपम सुविधाहरू छन्।
र Octiv भिडियो:
दुबै अनुप्रयोगहरूले प्रस्तावको प्रगति प्रतिक्रिया र अनुगमनको लागि सञ्चार प्रणाली प्रस्ताव गर्छन्। म यी दुवै प्रस्ताव प्रणालीहरूको लागि सम्भावनाहरूको बारेमा उत्साहित छु। को एक भक्त प्रयोगकर्ता को रूपमा फ्रेशबुक पुस्तकहरू, म वास्तवमै यी प्रणालीहरूको फ्रेशबुकमा एकीकरण देख्न मन पराउँछु! फ्रेशबुकमा एक अनुमानित प्रणाली छ (एक इनभ्वाइस ड्राफ्टको प्रकार) जुन ग्राहकलाई पठाउन सकिन्छ र पूर्वावलोकन गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरूमा प्रोब्जेबल र ओक्टिभका सबै सुविधाहरू छैनन्।
यस उत्पादनलाई रोल आउट गर्दैमा क्रिस्टियनलाई बधाई छ। निस्सन्देह ऊ र उसको टीम सफल हुनेछन्! क्रिस्टियानको ब्रान्डि firm फर्म विश्वकै सब भन्दा राम्रो हो। यदि मसँग सेवा सफ्टवेयरको रूपमा सफ्टवेयर छ र यसलाई उद्यम विकासको लागि सही रूपमा ब्रान्ड गरिएको चाहान्छु भने, फर्म सधैं मेरो छनौट हुनेछ।
टैग: रूपान्तरण ट्र्याकिंगफनेल रिपोर्टहरूओक्टिभप्रस्तावनीयअवधारण विश्लेषणसामाजिक रिपोर्टिंग
मार्केटरहरू क्र्यापको एकदम भरिएका छन्
धन्यवाद ब्लगर! DMCA गुनासो कार्य
जुलाई,, २०१ at 8::2010। बिहान
TinderBox उल्लेख डग को लागी धन्यवाद। हामीले जनवरीमा बिटामा लन्च गर्यौं र उत्पादनको प्रगति हुँदै गएपछि ग्राहकको राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गरेका छौं। हामी तपाईंको Freshbooks टिप्पणी दिमागमा राख्नेछौं!
प्रस्तावित को लागि नोड को लागी धन्यवाद! यो जान्न राम्रो छ कि महान प्रस्ताव सफ्टवेयर को दुई टुक्राहरू यहाँ इन्डियाना मा विकसित गरिएको थियो!
यो मनपर्छ, डग! KA+A ले गर्ने सबै कुरा राम्रा छन्, तर मलाई प्रस्तावित बिक्री प्रस्ताव निर्माणकर्ता र विश्लेषणको शक्ति मन पर्छ। उत्कृष्ट लेखन। धन्यवाद!
ब्राड, राज्यमा यस्ता उत्कृष्ट उद्यमीहरू पाउनु हामी भाग्यमानी छौं। मलाई स्प्राउटबक्सबाट आउने हरेक उत्पादन मन पर्छ र कम्पनी अचम्मको छ। राम्रो काम!
जुलाई,, २०१ at 9::2010। बिहान
डग: TinderBox फिचर गरिएको उत्कृष्ट पोस्ट लेख्नु भएकोमा धन्यवाद। हामीले सँगै राखेका कुराहरू समीक्षा गर्न तपाईंले समय लिनुभयो भन्ने धेरै अर्थ छ। हामी अवसरको बारेमा र स्थानीय सहयोगको गुणस्तरबाट साँच्चै उत्साहित छौं।
स्पष्टीकरणको बिन्दुको रूपमा - KA+A ले टिन्डरबक्सको निर्माणमा हाम्रा साझेदारहरू Gravity Labs, Dustin Sapp र Mike Fitzgerald - Indy व्यापार समुदायका दुई रक स्टारहरूसँग साझेदारी गर्यो।